Nyika Dzakapoteredza Zimbabwe Dzotora Matanho paCoronavirus
Nyika dzakakomberedza Zimbabwe mudunhu dziri kutora matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti Coronavirus izvo zvoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisare zvomerwe pakupinda munyika idzi.
Nyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinoti Botswana, Zambia, Mozambique neSouth Africa dziri kutora matanho ekudzivirira kupinda kwe Coronavirus munyika idzi kubudikidza nekutora matanho akasimba panzvimbo dzinopinda nevanhu vachibva kune imwe nyika.
Botswana yakazivisa kuti yavhara miganhu yayo nemusi weChipiri ukuwo South Africa iri mubushi rekukurudzira kuti vagari vemunyika iyi vasabude mudzimba kutanga neChina, Kurume 26, kwemasvondo matatu.
Zambia, Namibia neMozambique dziri kuitawo mushandirapamwe nedzimwe nyika dziri mudungu reSADC mukuvhara zvikoro uye kurambidza kuungana kwevanhu vazhinji senzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere icho chakatanga mudhorobha reWuhan KuChina muna Zvita gore rapera.
Asi matanho ari kutorwa nenyika dzakakomberedza Zimbabwe ari kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviomerwe kupinda munyika idzi.
Sachigaro wesangano reVendors Initiative and Economic Transformation, VaSamuel Wadzai, vaudza Studio7 kuti kuvharwa kwemabhodha kuchaita kuti vanhu vadye nhoko dzezvironda sezvo ruzhinji rwuchirarama nekutenga midziyo kuvavakidzani veZimbabwe kuti vatengese munyika.
VaWadzai vanoti hurumende yakafanira kuona kuti ingabatsire sei hungwandangwanda hwevanhu vanorarama nekutenga nekutengesa sezvo kutengesa ndiko kuri kuwanisa ruzhinji cheuviri.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chinotyaira bhazi rinofamba pakati pedhorobha reFrancistown muBotswana neHarare, VaMicheal Muzondiwa, vanoti mamiriro ezvinhu aita kuti vapererwe nebasa.
Asi Muzvare Peace Gwatidzo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kutevedzera yambiro dziri kupihwa nemapazi ezvehutano enyika dzakapoteredza Zimbabwe nokuti ndiyo nzira chete ingapedze kupararora kweCoronavirus.
Hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa yakavharawo mabhodha nemusi weMuvhuro mushure mekunge Zororo Makamba ashaika nokuda kwechirwere cheCoronavirus.
Nyika iri mudambudziko guru rechirwere cheCoronavirus mudunhu reSADC iSouth Africa iyo ine vanhu mazana manomwe nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi.